စမတ္က်တဲ့ ဖက္ရွင္နဲ႔ ေကာ္ဖီေသာက္ ေနတဲ့ အလန္းစားပုံေလးေတြကို မွ်ေဝလာတဲ့ ပရိသတ္ အခ်စ္ေတာ္မေလး ခန္႔ – Let Pan Daily
စမတ္က်တဲ့ ဖက္ရွင္နဲ႔ ေကာ္ဖီေသာက္ ေနတဲ့ အလန္းစားပုံေလးေတြကို မွ်ေဝလာတဲ့ ပရိသတ္ အခ်စ္ေတာ္မေလး ခန္႔
ပရိသတ္ႀကီးေရ ခ်စ္စရာအၿပဳံးေလးေတြနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးယဥ္ယဥ္ ေခ်ာေမာလွရက္လြန္းေနၿပီး အခ်ိန္တိုေလး အတြင္း ပရိသတ္ေတြ အခ်စ္ကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္တဲ့သူေလးကေတာ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ခန႔္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မင္းသမီးေခ်ာေလး ခန႔္ ကေတာ့ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြထဲမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ အတူ အႏုပညာနယ္ပယ္မွာ စတင္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီေနာ္…။ လက္ရွိ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈမွာေတာ့ ခန႔္ဟာ Photo Shooting နဲ႔ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြကိုလည္း ႐ိုက္ကူးေနရသူေလး ျဖစ္ပါတယ္။
ခန႔္ ဟာ တက္သစ္စမင္းသမီးေခ်ာေလးျဖစ္ေပမယ့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာ အေကာင္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ၿပီး အႏုပညာေလာကမွာ ပရိသတ္ေတြခ်စ္ခင္ရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေနသူေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ခန႔္က MRTV-4 မွာထုတ္လႊင္ျပသခဲ့တဲ့ “အခ်စ္ဖြဲ႕ေလညင္း” ျမန္မာ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေလး ထဲမွာလည္း ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါေသးတယ္။
ကပ္ေရာဂါေတြေၾကာင့္ stay home ကာလမွာလည္း ပရိသတ္ေတြနဲ႔ေဝးကြာ မသြားေအာင္ ခ်စ္စရာပုံရိပ္ေလးေတြအျပင္ အပ်င္းေျပေဆာ့ထားတဲ့ tik tok ဗီဒီယိုေလးေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ ခန္႔က ျမင္သူတိုင္း ေႂကြက်သြား ရေလာက္ေအာင္ အလန္းစားပိုစ့္ေတြနဲ႔ ဓာတ္ဖမ္းထားတဲ့ အလွ ပုံရိပ္ေလးေတြကို တင္ေပးလာတာျဖစ္လို႔ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရႈေစႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္…. ။
Source – Khant’s Facebook Page
စမတ်ကျတဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ ကော်ဖီသောက် နေတဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော်မလေး ခန့်
ပရိသတ်ကြီးရေ ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေနဲ့ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် ချောမောလှရက်လွန်းနေပြီး အချိန်တိုလေး အတွင်း ပရိသတ်တွေ အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့သူလေးကတော့ မင်းသမီးချောလေး ခန့် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးချောလေး ခန့် ကတော့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ အတူ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ စတင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါပြီနော်…။ လက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုမှာတော့ ခန့်ဟာ Photo Shooting နဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးနေရသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ခန့် ဟာ တက်သစ်စမင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပေမယ့် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ထားနိုင်ပြီး အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေချစ်ခင်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားနေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ခန့်က MRTV-4 မှာထုတ်လွှင်ပြသခဲ့တဲ့ “အချစ်ဖွဲ့လေညင်း” မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲလေး ထဲမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
ကပ်ရောဂါတွေကြောင့် stay home ကာလမှာလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးကွာ မသွားအောင် ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေအပြင် အပျင်းပြေဆော့ထားတဲ့ tik tok ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ ခန့်က မြင်သူတိုင်း ကြွေကျသွား ရလောက်အောင် အလန်းစားပိုစ့်တွေနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလာတာဖြစ်လို့ ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. ။
ပြည်သူ့ တပ်ဖွဲ့စည်းရင် စစ်မှုထမ်းမယ် လို့ ကတိ ပြုလိုက်တဲ့ အနုပညာရှင်များ
တစ်နေ့ တစ်မျိုး မရိုးနိုင်ပဲ ပရိသတ် ငေးမောသွား လောက်အောင် ချောမော လှပလွန်း နေတဲ့ “နန်းဆုရတီစိုး”